According to the Oromian Calender, November 09, is the annual Oromo Civil resistance Day in which the Oromians commemorate the peaceful struggle of Oromo nation and the popular nation-wide uprising in Oromia against subjugation. Nationalists in Oromia and around the globe commemorate the popular student uprising known as Fincila Diddaa Gabrummaa (meaning Revolt Against Subjugation) that broke out on November 09, 2005 following the failed national ‘election’ of 2005 in which the Oromo was denied any meaningful representation. It was on this day that the Oromo people heave their liberation struggle to a new height, covering the entire Oromo land in a highly coordinated manner that has never been seen before. On this day, the entire Oromo population accepted the call made by its vanguard liberation organization, OLF, and staged protests against the repressive rule of the TPLF/EPRDF government by raising legitimate demands. Our people have shown to the enemy and to the entire world that our struggle has grown in maturity, size and extent. November 9 will be remembered forever as a landmark in the history of the Oromo people.